Abakhiqizi be-Door Hinge Abakhiqizi & Abahlinzeki | Angeza
Ikhaya > Imikhiqizo > Ingibe > Umnyango hinge
Thumela umbuzo wakho
I-Door Hinge iyi-Hardware ebalulekile yefenisha yokuxhuma umnyango nohlaka lomnyango, olungakwazi kalula ukuvula umnyango ngokukhululeka.Ingabe amacala amaningi, liyababona besebenzisa izinhlobo ezahlukene zeminyango yonke indawo.
I-Addith Door Hinges Ukukhetha kwakho okuhlakaniphile, assortment yethu ama-hinges afaka izinhlobo ezahlukene zezinhlobo ezihlukile: ama-hinges emnyango wensimbi, njll. Sine-hinges ehlukahlukene futhi ecebile, ukukunikeza izinhlobo ezahlukahlukene zama-hinges kanye nama-hinges we izimfanelo ezahlukahlukene zokuhlangabezana nezidingo zakho. Yonke imikhiqizo yethu iye yahlolwa ukuhlolwa okuqinile kwe-SGS, futhi i-hinge ngayinye iye yahlolwa ikhwalithi eqinile.
I-Addith Door Hinges iyizesekeli zethu ze-Hardware ezizuzisayo nezifakiwe. Ngasikhathi sinye, siyakwazi ukukunikeza ngentengo enhle kakhulu futhi silawule kahle ikhwalithi.
Izinto zethu zokucwaswa komnyango zenziwa ngensimbi esezingeni eliphakeme, insimbi engenasici, enendlela yokulashwa ebushelelezi futhi enobuthakathaka, okungeyona intokolo, futhi imelana nosawoti nenkungu. Ubuciko obuhle benza i-hinge ivulekile futhi ivale kunoma iyiphi i-angle kahle. Ngemuva kwamashumi ezinkulungwane zama-switch, abushelelezi futhi awabanjwa.